Herinandro manomboka amin'ny 13 ka hatramin'ny 20 Jona - Vaovao | Legiona, Vaovao | WoW Guides | WoW Guides
Herinandro manomboka amin'ny 13 ka hatramin'ny 20 Jona - Vaovao
Sofia Vigo | | Legiona, About us
Salama daholo. Eto indray aho miaraka aminareo rehetra hitondra ny vaovao ho an'ny herinandro 13-20 jona ao amin'ny World of Warcraft. Andao handeha ho any amin'ny korontana!
Herinandron'ny 13-20 Jona
Amin'ity herinandro 13-20 Jona ity dia hanana boss vaovao miasa ao amin'ny Nosy Broken sy ao amin'ny Point Invasion Point any Argus isika. Fametahana Mythic + vaovao sy hetsika Bonus isan-kerinandro. Ady vaovao ary hanohy ny iraka arkeolojia tamin'ny herinandro lasa isika.
1 Hetsika Bonus Pet Battle Weekly
2 PvP Brawl: Southshore vs. Tarren Mill
3 Tompon'izao tontolo izao amin'ny nosy vaky
4 Boss an'ny Point Invasion ambony ao Argus
5 Fametahana angano +
Hetsika Bonus Pet Battle Weekly
Mandritra ny herinandro:
- Archmage Timereja, akaikin'ny Violet Hold any Dalaran, dia hanana iraka ho anao.
Fepetra tadiavina: Mandresy dema 5, milahatra, ary tadiavio ny duel PvP miaraka amina ekipa biby fiompy 25 ambaratonga telo.
Valisoa: Vato fampiofanana farany.
- Tombony azo: Pas ady amin'ny biby dia hanome traikefa 200%.
Araraoty ny fotoana hampiakarana ny biby fiompinao rehetra raha tsy mbola nampakarinao daholo izy ireo, amin'izay dia ho vonona ho an'ny duels vaovao amin'ny Battle manaraka ho an'ny fanitarana Azeroth ianao.
Avelako ianao a rohy miaraka amin'ny fampahalalana rehetra momba an'io hetsika io.
Ady anaty ala sy haingana izay ahafahantsika mamoaka ny adrenalinantsika amin'ny ady amin'ny ankolafy fahavalo. Iray amin'ireo adiko ankafiziko indrindra io, koa raha mbola tsy nanao an'io ianao dia manasa anao aho hanao izany ary milaza amiko ny niainanao.
Nampidirina am-piandohana ho ampahany amin'ny hetsika World of Warcraft XNUMX Annibers, niady hatramin'ny andron'ny WoW PvP niaraka tamin'ny adim-piainana nifanaovan'ny tanànan'ny Tarren Mill sy Southshore. Amin'ity lalao ady ity dia mila miasa toy ny ekipa ianao handany ny haren'ny fahavalonao sy hahombiazanao.
Tompon'izao tontolo izao amin'ny nosy vaky
Amin'ity herinandro ity manomboka ny 13 ka hatramin'ny 20 Jona dia hiasa isika Levantus izay haavon'ny tanjany dia 860. Hitanay ity boss ity ao Azsuna.
Peratra perla avy amin'ny fanambanin'ny ranomasina
Baody Masiaka Manitra
Rojo vita amin'ny nify Kraken
Gauntlets misy rantsan-tànana mihantona
Mittens "hoditra" ahidrano
Boss an'ny Point Invasion ambony ao Argus
Mandritra ity herinandro ity dia hiasa mavitrika amin'ny Teboka manafika ambony al Pit Lord Vilemus. Ny fandrobana nomen'ity sefo ity antsika dia 930, ka araka ny lazaiko anao foana, safidy tsara ny fampitaovana bebe kokoa ny tenantsika na hanaronana io banga io izay mbola tsy ananantsika amin'ny ambaratonga tadiavina. Afaka mahita an'ity sefo ity isika ao amin'ny Anrero Wastes.
Soul Crusher Stompers
Bracers mpitroka vile
Bracers of the Diabolical Fury
Breastplate an'ny farany farany
Manapaha hevitra ny satroboninahitry ny fandoroana
Sabatons amin'ny fanafihana tsy misy fitsaharana
Sash amin'ny fanomanana diabeta
Fonon-tànan'ny zava-bitan'ny bararata
Fel Spiked Shoulderpads
Leggings Bracero tafaporitsaka
Mpiambina entana enti-maty
Fametahana angano +
Mandritra ny herinandron'ny 13 ka hatramin'ny 20 Jona dia hampiasa ireto mombamomba ny Mythic + manaraka ireto izahay: fiheveran'olombelona, Necrotic y nanamafy. Na dia tsy fitambaran'ny sarotra indrindra aza izy io, ny mpitsabo dia tokony hitandrina ary ny hafa koa tokony hitandrina tsara mba tsy hanitsaka ireo puddles avelan'i Sanguina antsika. Mifalia amin'izay tratra isan-kerinandro.
fiheveran'olombelona: Rehefa novonoina, ny fahavalo tsy tompon'andraikitra dia namela dobo ichor maharitra, manasitrana ireo mpiara-dia ary manimba ny mpilalao.
Necrotic: Ny fanafihana melee fahavalo rehetra dia mihatra amin'ny lozam-pifamoivoizana, miatrika fahasimbana rehefa mandeha ny fotoana ary mampihena ny fanasitranana voaray.
nanamafy: Ny fahavalon'ny tsy tompon'andraikitra dia manana fahasalamana 20% bebe kokoa ary manimba hatramin'ny 30% ny fahasimbana bebe kokoa.
Amin'ity herinandro ity manomboka ny 13 ka hatramin'ny 20 Jona dia hanohy ny iraka arkeolojia isika amin'ny herinandro lasa izay, toy ny mahazatra, dia hanomboka any Dalaran amin'ny alàlan'ny mpampianatra ny arkeolojia. Ny zavatra ho azontsika amin'ny farany dia ny reliky ny haavo 840.
Ary hatreto ny vaovao rehetra amin'ny herinandro. Manantena fa mahafinaritra anao. Mandrapihaona amin'i Azeroth!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: WoW Guides » About us » Herinandro manomboka amin'ny 13 ka hatramin'ny 20 Jona - Vaovao
Mistweaver Monk amin'ny ady ho an'i Azeroth
Blizzard dia manala ny siosion-dresaka mpandatsa-dra amin'ny maha-mpiray dina azy